Kuteedzera Linux ... paWindows! | Linux Vakapindwa muropa
Kazhinji isu tinowanzo verenga izvo, kubva kuLinux, neimwe nzira imwe software yeWindows inoteedzerwa (kwechinguvana). Tichaita chimwe chinhu chakareruka: kubva paWindows, tichagadzira muchina chaiwo watinoisa, gare gare, kugoverwa kweX kwatinosarudza kubva kuLinux, mune yangu ndichaisa openSUSE 11.0
Ngatione zvimwe zvakanaka nezvakaipa yeiyi maitiro:
* Tiri kuzodzidza maitiro ekugadzira muchina chaiwo, hazvireve kuti zvakaoma zvikuru, asi panogara paine kekutanga.
* Tiri kuzozvizivisa nehukama hwekuparadzirwa kweLinux tisina kumbosiya Windows.
* Kana muchina chaiwo wakaputsika… wakatyorwa uye voila. Isu tinogadzira imwe nyowani.
* Tinogona kugadzira michina yakawanda iine migove yakawanda sekuda kwedu (uye dhisiki dhisiki inobvumidza, hongu).
* Tinogona kuyedza kumisikidza kwakasiyana, tafura, mhedzisiro, mavara, zvirongwa, nezvimwe, nezvimwe.
Uye pakati pezvakaipira:
* Tinofanirwa kuisa software inodikanwa kuti tigadzire uye tiitezve muchina chaiwo
* Virtual michina inotora diski nzvimbo, zvakajeka.
* Zvese chirongwa chinomhanyisa muchina uye muchina chaiwo pachawo uri pasi peWindows uye unonaka uye unogadzikana.
* Pakupedzisira ... tinoenderera mberi paWindows.
Zvino zvataongorora zvakanaka nezvakaipa nezvatichaita uye tafunga kutanga, ngatitangei kushanda!
Ngatiisei VMware Workstation, inova software inotibvumidza kutevedzera kuiswa kwedu kweLinux. Pane imwe chete yaiswa, tinoenda kumenyu Faira / Mutsva / Virtual Machine.
Isu tave kumberi kwesarudzo dzekumisikidza sisitimu yekushandisa kuti vateedzerwe. Ngatisarudzei Chaizvoizvo.
Padanho rinotevera, ticha sarudza kuti ndeipi sisitimu yekushandisa yatinoda kutevedzera Zviripachena, isu tinosarudza iyo Linux sarudzo. Tinogona kuona kuti pane yekudonhedza-pasi runyorwa kusarudza iyo vhezheni yeLinux iyo inozo nyatso kuiswa, kunyangwe zvisina kunyatso kudikanwa kuratidza chaizvo iri vhezheni yedu (pane sarudzo 'Imwe Linux' iri yakazara yezvose izvo zvisarudzo zvisina kuratidzwa mune izvo zvinyorwa).
Unogona kuona mumufananidzo wandasarudza SUSE Linux, zvinoenderana nezvandichaedza.
Gare gare, isu ticha sarudza kuti ndeipi mhando yeinternet yekubatanidza muchina wedu unenge uine. Ini ndinowanzo sarudza yekutanga sarudzo, kuti ndisanetse hupenyu hwangu.
Uye ikozvino, chikamu chinonakidza kwazvo. Isu tinofanirwa kusarudza kuti rakakura sei hard drive remuchina wedu muchina richava.
Iyo 8 GB inoratidzirwa ndiyo yakasarudzika sarudzo, unogona kuchinja iyo kukosha sezvazvinodiwa. Kune rangu divi, ini ndave kuzosiya zvakadaro.
Ngatimirei pabhokisi rekutarisa rakaratidzwa:
Govera yese disk nzvimbo izvozvi: Zvinoreva kuti 8 GB icha'torwa 'ichagadzirirwa muchina wedu. Kana isu tikasaisa mucherechedzo uyu, saizi yayo inokura zvishoma nezvishoma pamwe nezvatinotora (kurodha pasi mapakeji kana software, nezvimwewo) mukushandisa kwemuchina. Ini ndinokurudzira kuti iwe usiye iyi sarudzo isina kuongororwa.
Split disk mu 2 GB mafaera: Ini handioni chakakosha chinoshandiswa, ini ndinokurudzira kuchisiya chisina kuongororwa.
Isu takatogadzirira. Nekusarudza Pedza, unotevera meseji unoratidzwa:
Iwe uchaona kuti zvakanyatsotaurwa izvo iyo inoshanda sisitimu ichiri kuda kuiswa kuti ishandise muchina.
Zvino ndipo patinogona kusarudza kukwirisa mufananidzo wekuparadzirwa kweLinux iyo yatinoisa kana, sezvandakaita, isa iyo Open SUSE LiveCD muCD muverengi, tinya bhatani reGreen Play, uye nakidzwa nematanho edu ekutanga muLinux ... pasina kusiya Windows! :)
Ndinovimba kuti wawana zvichibatsira, nguva inotevera patinoisa iyo distro uye nekuisiya ichishanda, iwe unofungei?
Zvinongedzo zvinogona kukufadza:
Ruzivo paVMware Workstation - kubva kuWikipedia
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Kutsigira Linux… paWindows!
Chinhu chekukamura kuva 2Gb mafaera chinofanirwa kunge chiri nekuda kwehukuru hwehuremu hunowanikwa neFAT.
Kana, nekuda kwechimwe chikonzero, iwe uchifanira kuendesa chaiwo mafaira emuchina kune yekuchengetedza svikiro neFAT, haugone. Asi kana ikakamurwa kuita 2Gb paisazove nematambudziko.
Icho chinhu chinowanikwa kwandiri. Handizive kana icho chiri icho chinangwa chekupedzisira chesarudzo iyoyo.
Akadaro Lester. Wakandirova neruoko. hahaha. Ini handifunge kuti pane chimwe chikonzero cheicho poindi kunze kwekugona kuchishandisa pazvikamu zveFAT32.
Ini ndinofunga kuti nekuda kweblogger yedu nyowani, ndiri kuzoyedza vhiki rino.
Kana zvisiri zvembavha yekuwedzera, inyaya yekuti ndinoedza linux ... ba ... inogara iri chikonzero chakanaka chekuparadza nyika
nooooo muchina waMwari unoita zvaunoita !!! esty iri kuenda kuyedza linux !!! NDOKUGUMA KWENYIKA!
Izvo zvinozadzisa zvakafanana basa?
Sezvo iyo blog iri nezve linux, unogona kushandisa openource solution panzvimbo yepropertic vmware… handiti? sezvinei, haufanire kuenda kunotsvaga kutsemuka kana serial kana chero chinhu chakadai ...
naaa ... usabvumirana na gabo ... ndiani anotaririra kufungira kubudirira, hahaha.
Iyi vhiki yevhiki ndinoedza.
@Gabo: Zvakanaka chaizvo.
@Esty: Ini handina kuishandisa, asi ndinofunga inoshandisa chinangwa chimwe chete
Iyo yakanaka yekupinda kune avo vachiri kutya kana kuregererwa, edza Linux kamwechete uye zvachose, kunyangwe iri "kubvisa kusahadzika."
Esty, unogona. Iwe unofanirwa kungozvisiya iwe uende ...
VirtualBox inoshanda pamapuratifomu eWin32 uye inogona kushandiswa nyore nyore kumhanyisa Linux paWindows.
Ndiri naGabo: zvingave zvakanaka kuyedza Mahara Software kuburikidza neMahara Software.
Vanotonhorera sei vakomana vakatsanangura nezve 2GB. Ini ndanga ndisingazive iyo, ndatenda :)
Uye maererano neVirtualBox, ini handina kumboishandisa, ini ndiri kuenda kuyedza. Panzvimbo iyoyo ini ndakashandisa VMware, uye inoshanda mushe, uye ndinoifarira, ndosaka ndakazvitsanangura nechombo icho.
Uye ini ndinoedza yemahara software mune yakabhadharwa software nekuti ini ndiri zvakare rinorema re fucking che !!
Wakabhadhara kopi yako yeWindows?
Ini ndinokurudzira kune chero munhu anoda kuchinjira kuLinux kuti aite zvinotaurwa nechinyorwa chino. Kutanga nemuchina wekuona ndiyo nzira yakanakisa yekudzivirira kutora njodzi.
Ndatenda jago nekumira
Makadii? Ndanga ndichitsvaga shamwari dzangu dzefafizera, imwe nzira inonakidza kwazvo inonzi AndLinux, chishandiso ichi chingave chiri chekutanga kuenda kuLinux, kana uchifarira, ndinokusiira chinongedzo kuchinyorwa ichi:
Kwaziso uye rakanakisa blog, senguva dzose! : D
Pindura kuna jago_ff
Gabo, iwe cayate kuti dai ndisati ndawana kopi yangu yekuhwina Ue, ndaizoenda kumba kwako kunotsvaga kopi yako.
hongu… software yangu yechipiri yepakutanga muhupenyu hwangu. Yokutanga yaive mutambo waMalvinas.
Ini ndinokuyeuchidza kuti mwedzi mishoma yapfuura ndakakupa iyo yekutanga ubuntu feisty ... iwe unogona kuishandisa.
Thanks jago !! Ini ndinonyora pasi ese sarudzo kuti ndivaedze.
jojo encerio nzira yakanakisa yekuyedza linux iri neiyo live cd
Aya ndiwo maitiro andakambozviedza kwe2 kusvika kumavhiki matatu uye kubva panguva iyoyo ndakadanana neUbuntu 3 saka ndakaiyedza neiyo live cd uye ipapo ndakafunga kuiisa uye ndakakwanisa kuzviita nekuda kwezvakanaka batsira kuti pane maforamu e linux! ahh ikozvino mumwe munhu angandiudza maitiro ekuisa compiz fusion ndeyekuti ini ndoda kuve neiyo 8.04d desktop yekutenda pamberi ...
Mushure mekuisa chirongwa ichi, zvinokwanisika kutevedzera OS, uchishandisa pendrive sezvo DVD rangu dhiraivha rakakuvara.
maita basa ini ndakamirira mhinduro yako
Pindura kuna August